Eshibhile CNC Milling izingxenye zepulasitiki ifektri kanye nabaphakeli I-Ouzhan
Imishini yePlastiki ifaka izinto eziningi ezifanele ukwenziwa kwemishini, inayiloni (i-PApolyamide), i-PC (i-polycarbonate), i-ABS (i-co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), i-PMMA (i-plexiglass, i-poly Acrylic methyl ester), i-polytetrafluoroethylene (F-4), i-epoxy (EP) ). Lapho kukhethwa izinto zokwakha imidwebo, kufanele kukhethwe amaplastiki afanele wobunjiniyela ngokuya ngemvelo yokusetshenziswa kanye nezidingo ezifanayo zezingxenye zemishini ze-CNC.
Ipulasitiki ye-CNC Milling-Precision Plastic Milling Parts Machining Center
Izinzuzo ze-Ouzhan Plastic Milled Parts
Isevisi yokugaya epulasitiki eyenziwe ngokwezifiso ye-OEM umkhiqizi wezingxenye zepulasitiki we-CNC
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ukucacisa okuphezulu kwe-CNC izingxenye zepulasitiki ezinekhwalithi ezinzile nethembekile kungacutshungulwa. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini wepulasitiki. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo epulasitiki ye-CNC inikezwe ngokuqinile ukuhlangabezana nezindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana ngemikhiqizo yeplastiki ye-CNC yokugaya kumakhasimende ethu abalulekile.
Izici Ouzhan plastic milling izingxenye
Izinzuzo ze-Ouzhan Plastic Milling Service
- Yonke imikhiqizo yepulasitiki ecolisisiwe ye-CNC ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokukhiqiza ngokunemba izingxenye zezingxenye zepulasitiki.
Langaphambilini Izingxenye ze-OEM zensimbi zensimbi zokugaya izimboni
Olandelayo: Izingxenye zokuguqula ze-CNC